» “माधव नेपालले, चन्द्रागीरी पुगेर,बोलेको झुट एक महिना पछि छताछुल्ल, दिउँसै रात, पार्न कति सिपालु ! “माधव नेपालले, चन्द्रागीरी पुगेर,बोलेको झुट एक महिना पछि छताछुल्ल, दिउँसै रात, पार्न कति सिपालु ! – हाम्रो खबर
“नेकपा एमाले विभाजन गराउँन माधव कुमार नेपालले एक महिना अघि आफु पक्षका सांसद र केन्द्रिय सदस्यलाई चन्द्रागिरी रिसोर्टमा लगेर मस्ती गराएका थिए ।”
“चन्द्रागिरी रिसोर्टबाट सिधै निर्वाचन आयोग पुगेर पार्टी दर्ताको सनाखत गरे पछि मात्रै केन्द्रिय सदस्य र सांसदलाई छाडिएको थियो । माधव नेपाल दिउँसै रात पार्न कति सिपालु रहेछन् भन्ने कुरा एक महिना पछि छताछुल्ल भएको छ ।”
“नेकपा एसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले चन्द्रागिरी रिर्सोटमा दुई दिन सम्म सांसद र केन्द्रिय सदस्यलाई राखेर बोलेको झुट अहिले बाहिर आएको छ । एमाले फुटाएर नेकपा एस बनाउँदा नेपालले आफ्नो दस्तावेजमा नेकपा एसले सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको संगठन नबाउँने भनेर बोलेका थिए तर त्यो सबै झुट भएको अहिले प्रमाणित भएको छ ।”
“त्यो बेला नेकपा एसले गरेको प्रस्तावलाई लिएर निकै प्रशंसा पनि भएको थियो यो काम भने गजबको भयो भनेर । नेपालमा विकास र सम्वृद्धि हुन नसक्नुको कारण नै कर्मचारी र शिक्षकले राजनिती गरेर हो भनेर धेरैले प्रशंसा गरेका थिए तर पार्टी दर्ता भए लगत्तै एस पार्टीले सरकारकी कर्मचारीको संगठन बनाइसकेको छ।”
“संगठन मात्रै बनाएको भए त हुन्थ्यो नि अहिले माधव नेपालको पार्टीका विभिन्न संगठनहरु मध्ये कर्मचारीको संगठन सबैभन्दा अराजक भएर भएर निस्कीएको छ । सरकारी कर्मचारीको ड्रेस लगाएर माधव नेपालका कार्यकर्ताहरु अफिस तो,ड,फो,ड, र कब्जामा निस्कीएका छन् ।”
“नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनको केन्द्रीय कार्यालय भवन कब्जा गर्ने क्रममा दुई पक्षबीच विवाद भएपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । एमाले विभाजनसँगै कर्मचारी संगठन पनि विभाजित भएको छ ।”
“अध्यक्ष केदार देवकोटासहितको संस्थापन पक्ष केन्द्रीय कार्यालयमा काम गरिरहेका बेला नेकपा एस निकट कर्मचारी नेताहरुको टोली आफूहरु आधिकारिक भएको भन्दै कार्यालय पुगेपछि विवाद भएको थियो ।”
“सिंहदरवारको पश्चिम गेट अगाडि रहेको संगठनको कार्यालय भवनमा नाराबाजी र झडपको अवस्था भएपछि प्रहरी पुगेको हो । प्रहरीले दुवै पक्षका नेताहरुलाई पक्राउ गरेको छ ।”
“अध्यक्ष केदार देवकोटासहित संस्थापन पक्षका कर्मचारीलाई अनमानगरस्थित प्रहरी कार्यालयमा लगिएको छ भने नेकपा एस पक्षका अध्यक्ष रेवन्त गौतम, पूर्व अध्यक्ष मोहन घिमिरे, महासचिव शरण गुरुङ लगायतलाई महेन्द्र पुलिस क्लबमा लगिएको छ ।”
“संगठनबाट बाहिरिएका पक्षले कार्यालयमा कब्जा गर्ने उद्देश्यले नाराबाजी र तोडफोड गरेको आरोप प्रहरी कार्यालयमै रहेकी केन्द्रीय सदस्य अन्जु बस्नेतले बताइन् । उनका अनुसार प्रहरीले १० मिनेटमा कार्यालय खाली गर्न भन्दै निकालेको थियो ।”
“उता पूर्व अध्यक्ष मोहन घिमिरेले भने आफूहरुलाई महेश बस्नेतका गुण्डा लगाएर कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिइएको र प्रहरीले पक्राउ गरेको बताए । उनले भोलि पनि कार्यालयमा जाने बताए ।”
;कर्मचारी संगठन विभाजनसँगै आधिकारिकताको विवाद बढेको छ । घिमिरे पक्ष आधिकारिकता दावी गर्दै श्रम कार्यालयमा गएको छ । तर अध्यक्ष देवकोटाले भने आफूसहित कार्य समितिको बहुमत संगठनमै रहेकाले आफूहरु नै आधिकारिक रहेको बताए ।”